Natomboka ny tranokala vaovao an'ny teknolojia Wally machinery
Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny tranokalan'i Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd. Misaotra anao tamin'ny fiheveranao ny fampandrosoana an'i Wally. Mba hanompoana anao tsaratsara kokoa, ny tranokala Wally dia nohavaozina sy nohavaozina, ary ny tsanganana ivon-tsoratry ny tranokala dia hampiasaina hanavaozana an'i Walley & ...
Volley teknolojia mekanika servo spindle R & D fahombiazana
Niorina ihany ny ivon-toerana fitiliana efa nandrasana hatry ny ela. Ny fametrahana ny foibem-pitsapana mazava tsara dia nanome fanohanana matanjaka ho an'ny sampana kalitaon'ny departemanta famokarana. Ao amin'ny indostrian'ny milina mazava tsara ao amin'ny CNC, ny fitiliana mazava ho azy dia tena ilaina ...
Niorina ny ivon-toeram-pitsapana marina Wolley ho an'ny teknolojia mekanika
Ny teknolojia Wally milina dia nandany ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao TS16949
Mankalaza fatratra izahay fa ny teknolojia milina Waley dia nandalo fanamarinana rafitra fitantanana kalitao iso / ts16949. Lso / ts 16949 dia ISO9001, QS 9000 (US), avsq (italianina), eaqf (frantsay), ary VDA6.1 (alemà) no rafitra fitakiana kalitao mahazatra amin'ny indostrian'ny fiara. Raha fintinina dia qua ...
Ny teknolojia milina Wally dia nahavita ny fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001
Tamin'ny 26 Aogositra 2009, ny teknolojia milina Dongguan Waley dia nitondra ny fanamarinana ny rafitra kalitao ISO9001. Naharitra herintaona ny fiasan'ny rafitra fitantanana ISO9001 ka hatramin'ny fahavitan'ny fanamarinana. Taorian'ny fanombohan'ny fitantanana kalitao ISO9001, ny sampana rehetra dia nanangona ny ...
Teknolojia milina Wally 2020 Fianakaviana taom-baovao dia miara-mankalaza ny taona vaovao
Tamin'ny 31 Desambra 2019, ny teknolojia Wally milina dia nanomboka ny taom-baovao taom-baovao, ary tonga ny fetin'ny Andro vaovao araka ny voalahatra. Ny sampana fitantanana dia nanomana sy nikarakara lanonana fisakafoanana ho an'ny fetin'ny Andro vaovao. Niangona daholo ny fianakavian'i Wally hanao ...